तरबारबाजी जस्तै देखिने फेन्सिङ सुरक्षित खेल « News of Nepal
सन् २००२ मा अफिस एसिस्टेन्टको रुपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा काम सुरु गरेर अहिले एक्ज्यूकेटिभ सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका हुन् सुजन लाल श्रेष्ठ । नेपालमा फेन्सिंग खेल भित्राउने श्रेय पनि उहाँलाई नै जान्छ । ओलम्पिक गेम्स म्यानेजमेन्ट र ओलम्पिक गेम्स हिस्ट्रीमा स्नातकोत्तर गरेका उनी झन्डै डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपाल फेन्सिंग संघका महासचिव समेत रहेका श्रेष्ठसँग नेपाल समाचापत्र का लागि कविरस शर्मा ले गरेको कुराकानीः
खेलकूदतिर कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
फुटबल र क्रिकेटमा रुचि भएका कारण खेलकूदतिर आकर्षित भएको हुँ । पहिला म फुटबल खेल्थे । सी डिभिजन टोली युवा समाज क्लबबाट खेल्ने गर्थे । त्यसपछि क्रिकेटतिर पनि आकर्षित भएँ । त्यतिबेला काठमाडौंमा दुई÷तीन वटा मात्र स्थानीय क्रिकेट क्लब थिए । क्रिकेटबारे धेरै जना अनभिज्ञ नै थिए । विधालय पढ्दा नै टुँडिखेलमा अरुले क्रिकेट खेलेको देखेर विस्तारै मोह बढेको थियो । घरबाट पढ्न दवाब बढेपछि चाहिं खेल सौखकै रुपमा रह्यो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा कहिलेदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ ?
स्नातक सकाएपछि मैले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा काम गर्ने अवसर पाएँ । सन् २००२ देखि म नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा कार्यरत छुँ । सुरुमा अफिस एसिस्टेन्टको रुपमा प्रशासनिक काम हेर्थे । त्यो बेला ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँको मातहतमा रहेर मैले प्रशासन सम्बन्धित काम सिक्ने अवसर पाएँ । त्यतिबेला नै किशोरबहादुर सिंह डाइरेक्टर रहेको ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ जस्तो ठूलो प्रोजेक्टमा पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ ।
त्यसपछि सन् २००४ मा तत्कालिन अध्यक्ष रुक्म शम्शेर राणाको मातहत काम गर्ने अवसर मिल्यो । एक्ज्यूकेटिभ सेक्रेटरीमा बढुवा भएपछि मैले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयदेखि प्रशासन, फाइनान्स लगायत ओभरअल सबै हेर्न थालेको हुँ । सुरुमा यो चुनौतीपूर्ण थियो । तर तत्कालिन पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको साथले गर्दा मलाई चुनौती पन्छ्याउन गा¥हो भएन ।
ओलम्पिक सम्बन्धित कोर्समा स्नातकोत्तर गर्नुभएको हो ?
सन् २०१३/१४ मा मैले ग्रीसको ओलम्पिया सहरमा अवस्थित इन्टरनेसनल ओलम्पिक एकेडेमीबाट ओलम्पिक गेम्स म्यानेजमेन्ट र ओलम्पिक गेम्स हिस्ट्रीमा मास्टर्स डिग्री गरेको हुँ ।
काम र पढाईलाई सँगसँगै कसरी लानु भयो ?
स्नातकपछि काम गर्न थालेकोले पढाई ब्रेक भएको थियो । त्यसपछि एकैपटक सन् २००९ मा ग्रीसको ओलम्पियामा रहेको इन्टरनेसनल ओलम्पिक एकेडेमीमा मास्टर कोर्स अन्तर्गत ओलम्पिक स्टडीज र ओलम्पिक म्यानेजमेन्ट कोर्स सञ्चालन हुने कुरा तत्कालीन कोषाध्यक्ष उपेन्द्र न्यौपानेबाट जानकारी पाएँ । त्यसपछि मैले प्रक्रिया थाले । मास्टर्सको त्यो पहिलो ब्याच थियो । त्यसका लागि म छनोट पनि भएँ ।
तर त्यसमयमा नेपाली एथ्लेटिक्सका जर्मन प्रशिक्षकको डोपिंग विवाद प्रकरण चुलिएको थियो । जसका कारण मैले त्यो वर्ष नेपालमा रहेको फ्रेन्च दूतावासबाट ग्रीसको भिसा पाउन सकिन । त्यसको एक वर्षपछि मैले आफु सहभागी हुन नसकेको कारण उल्लेख गरेर भारतमा रहेको ग्रीस दूतावासमा नै पुगी पुनः भिसा प्रक्रिया अघि बढाएपछि पढ्ने अवसर पाएँ । मेहनत चाहिँ धेरै नै गरें । थेसिस पूरा गर्न भने १ वर्ष लाग्यो ।
नेपाली खेलकूद विकासमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?
खासमा खेलकूद विकासका लागि योजना बनाउने भनेको राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । ओलम्पिक कमिटी भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूदसँग सम्बन्ध बनाउने पुल मात्र हो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि ओलम्पिक कमिटीले समन्वयको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । त्यो बाहेक हामीले गर्ने भनेको कुनै पनि खेलको स्तर उकास्न आवश्यक प्रशिक्षक, अध्ययन अथवा छात्रवृत्तिको अवसर प्रदान गर्नु हो ।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकूद (साग) नजिकिँदै छ, तयारी कस्तो हुँदैछ ?
हामीसँग करिब ५ महिना बाँकी रहेको छ । राज्यबाट जुन गतिमा तयारी हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको हो की भन्ने मलाई लागेको छ । ओलम्पिक कमिटीले त प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि सहज वातावरण मात्र बनाइदिने हो, खेललाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न खेल सम्बन्धित प्राविधिक पक्षलाई सम्हाल्ने हो । प्रतियोगितालाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारदेखि बजेट ब्यवस्था राज्यकै दायित्वभित्र पर्दछ । खेलको मिति जति नजिकिन्छ त्यति नै दवाब बढ्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा काम गर्ने अवधि बढाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
१३औं सागका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ?
हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै काम रोकिएको छैन । सार्क राष्ट्रका ओलम्पिक कमिटीहरुसँग राम्रो समन्वय र सहकार्य भई नै रहेको छ । सागबाट सेन्ट्रल एसिया स्पोर्ट्समा आबद्ध भएका अफगानिस्तानले समेत अहिले पुनः सागमा सहभागी हुनका लागि इच्छा देखाइरहेको छ । तर अहिलेको लागि भने हामीले त्यो विषयलाई त्यति महत्व दिएका छैनौ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न जाँदा ओलम्पिक कमिटीको भूमिका कस्तो हुने गर्दछ ?
ओलम्पिकको नै कुरा गर्ने हो भने त्यसमा पूर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नै खर्च बेहोर्ने गर्दछ । त्यसमा सहभागी देशका खेलाडीले पाउने पर्ने सबैखाले खर्च र सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र नेपाल ओलम्पिक कमिटीकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।
तर एसियन गेम्स अथवा सागका लागि हुने सम्पूर्ण खर्च भने राज्यको दायित्व भित्र पर्छ । तर खेलाडीको तयारी प्रशिक्षणका वा वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि भने अनुकूल वातावरण मिलाउन नेपाल ओलम्पिक कमिटीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
कुनैपनि राष्ट्रिय खेल संघका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?
विशेषगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भूमिका भनेको राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुको स्वायत्ततालाई रक्षा गर्ने र ओलम्पिक चार्टर अनुसार ओलम्पिक मुभमेन्टको विकास र विस्तार गर्ने हो । कुनै पनि राजनैतिक निर्णय अनुरुप संघमा हस्तक्षेप नगर्ने र नगराउने हो ।
राष्ट्रिय खेल संघसंग नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पुलको काम कसरी गर्छ ?
नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग सम्बन्धन भएका जम्मा २६ वटा खेल संघ मात्र नेपालमा छन् । जसमध्ये २४ वटा ओलम्पिक स्पोर्ट्स र बाँकी दुई वटा नन् ओलम्पिक स्पोर्ट्स छन् ।
१३औं सागमा समावेश २७ खेल पनि ओलम्पिक र नन् ओलम्पिक दुवै छन् । ती खेल संघलाई हामीले प्राविधिक सहयोग गर्ने हो । जस्तो की उच्चस्तरको प्रशिक्षणका लागि खेलाडीलाई विदेशमा पढ्न र प्रशिक्षणमा पठाउने, खेलको नियमहरु अपडेट गराउने, रेफ्री कोर्स, कोचेज कोर्स लगायत छन् । त्यो बाहेक विदेशी प्रशिक्षकलाई नेपालमा भित्राउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।
नेपालमा फेन्सिंग खेल कसरी भित्राउनु भयो ?
सन् २००६ मा कतारको दोहामा एसियन गेम्स हुँदा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको एम्बेस्डरको रुपमा म सहभागी भएको थिएँ । जसमा भारतबाट पनि म जस्तै एकजना एम्बेस्डर अरुण विजय आउनु भएको थियो । उहाँ बितिसक्नु भयो । उहाँ फेन्सिंगका साउथ एसियन रिजनको र इन्डियन फेन्सिंग फेडेरेसनका पनि महासचिव हुनुहुन्थ्यो । फेन्सिंग ओलम्पिक स्पोर्ट्स भएकोले उहाँकै सुझाव र सहयोगमा मैले सन् २००९ मा नेपालमा फेन्सिंग खेल भित्राएको हुँ ।
त्यतिबेला फेन्सिंगको बारे केहि थाहा छैन भन्दा उहाँले नै प्रशिक्षक पठाउनुका साथै र खेल्ने आवश्यक सामाग्री पनि सहयोग गर्नुभएको थियो । हामीले सन् २०१० मै वल्र्ड फेन्सिंग च्याम्पियनशिपमा सहभागिता जनायौं । खेलाडीको रुपमा अभिषेक कार्कीको सहभागिता भएकोथियो । त्यसको एक वर्षपछि भारतमा भएको प्रतियोगितामा फेन्सिंगमार्फत् पहिलो काश्य पदक जित्न सफल भयौं ।
नेपालमा फेन्सिंगको परिचय कसरी गराउनु भयो ?
हामीलाई महाराजगञ्जस्थित शिवपुरी स्कुलले ठूलो सहयोग गरेका छन् । हामीले फेन्सिंगको सुरुवात नै त्यहीबाट गरेका हौं । त्यहाँ ९÷१० कक्षामा अध्ययनरत विधार्थीलाई फेन्सिंगको बारेमा ब्रिफिंग गराएर हामीले प्रशिक्षणको सुरुवात गरेका थियौं । त्यस्तै काँडाघारीमा बस्ने मार्सल आर्ट्सका खेलाडीहरुले पनि फेन्सिंगप्रति इच्छा देखाएपछि त्यहाँ पनि हामीले प्रशिक्षण गरायौं ।
फेन्सिंग कस्तो खेल हो ?
हुबहु तरवारबाजी जस्तो देखिने यो निक्कै सुरक्षित कम्ब्याट खेल हो । मेटल स्टिक शरीरमा छोएर अंक लिइन्छ । सेन्सर प्रणालीबाट अंक दिइने यो खेलमा शरीरलाई पूर्णरुपमा सुरक्षित राख्ने विशेष प्रकारको पोशाक र हेलमेट लगाइन्छ । यो संसारकै पुरानो खेलमा गनिन्छ । तर नेपालमा भने नयाँ हो । यसलाई इटाली र फ्रान्सबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १८९६ मा मोडर्न ओलम्पिक सुरुभएयता देखि नै संसारमा यो खेलले परिचय बनाएको हो ।
नेपालमा फेन्सिंग संघको दर्ता कसरी गर्नुभयो ?
मैले सुरुमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन गरिसकेको थिएँ । नेपालमा भने मैले सुरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो संघ दर्ता गरेको हुँ । त्यसपछि सन् २०१४ मा राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका तत्कालिन सदस्य सचिव युवराज लामाको कार्यकालमा मैले राखेपमा दर्ता गराए । सुनील श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पहिलो पटक नेपाल फेन्सिंग संघ गठन भएको हो । त्यसका लागि मलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीका तत्कालिन अध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान र राखेप सदस्य सचिव युवराज लामाले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो ।
अहिले नेपालमा फेन्सिंगको अवस्था कस्तो छ ?
यो खेल नेपालमा भित्रिएको धेरै भएको छैन । नेपालमा फेन्सिंग खेल बारे धेरै कमलाई मात्र थाहा छ । यो खेल्ने आवश्यक सामग्री नेपाली बजारमा पाउन पनि सहज छैन । घरेलु प्रतियोगिताको कुरा गर्ने हो भने फेन्सिंगमा नेपाली आर्मीको दबदबा रहेको छ ।
यो खेल आसन्न १३औं सागमा पनि पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । तर सरकारको महत्वमा भने यो खेल पर्न नसकेको जस्तो लाग्छ । सरकारीस्तरबाट यसमा गर्नु पर्ने धेरै नै देख्छु । प्रशिक्षणका लागि खेलस्थल नै छैन । कम्तिमा पनि आगामी सागलाई मध्यनजर गरी प्रशिक्षणस्थल उपलब्ध हुन्छ की भन्ने आशा गरेको छु ।
१३औं सागमा यो खेलबाट पदक आशा गर्न सकिन्छ ?
स्वर्ण पदक नै ल्याउँछ भनेर भन्दिन । तर रजत पदकको प्रबल सम्भावना छ । किनभने दक्षिण एसियामा भारतीय फेन्सिंगको स्तर निक्कै उच्च रहेको छ । पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशको स्तर भने हाम्रो जस्तै हो । रजत ल्याउने दावी किन गर्छु भने सन् २०१८ मा बैंककमा सम्पन्न एसियन फेन्सिंग च्याम्पियनशिपमा हाम्रो खेलाडीले श्रीलंका र बंगलादेशलाई सहजै हराएका थिए ।
१३औं सागका लागि फेन्सिंगको तयारी कसरी चल्दैछ ?
मुख्यतः प्रशिक्षणस्थल र दक्ष प्रशिक्षक अभावका कारण नै अहिले ट्रेनिंग सहज हुन सकिरहेको छैन । कहिले कता कहिले कता गरी बन्द शिविर प्रशिक्षणमा ६ जना खेलाडीले ट्रेनिंग गरिरहेका छन् । मुख्यतः अहिले हाम्रो समस्या भनेको प्रशिक्षणस्थलको अभाव नै हो ।
ट्रेनिंगका लागि एकपटक सेट गरिसकेका औजारहरु पनि निश्चित प्रशिक्षणस्थलको अभावका कारण पटक पटक सार्नु परेकाले खेलाडीलाई असुविधा भएको छ । यो बाहेक एकजना दक्ष प्रशिक्षकको पनि खाँचो रहेको छ । यो खेल १३औं सागमा समावेश गरे लगत्तै बंगलादेशले दक्षिण अफ्रिकाका चर्चित ओलम्पियनलाई प्रशिक्षकमा नियुक्ति गरिसकेका छन् । श्रीलंकाले पनि अन्य देशका प्रशिक्षकलाई भित्राएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेः नेपालको एक इन्च..
मनाङको ‘अर्गानिक’ स्याउ काठमाडौँमा कहाँ पाइन्छ..
चितवनमा चौकीबाट भाग्ने सेनाका जवानको मृत्यु, राजमार्ग अवरुद्ध
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेः नेपालको एक इन्च भूमि पनि मिच्न दिँदैनौं, कालापानीमा आफ्नै सेना राख्छौँ